Pyae Phyo (MMiTD): June 2014
♪ ပြည်တွင်း၌ လူသုံးအများဆုံး Messaging App အဖြစ် Viber ရပ်တည် ♫
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူသုံးအများဆုံး Messaging App အဖြစ် Viber ကဦးဆောင်နေပြီးFacebook Messenger ကိုသုံးစွဲမှုမှာ ဒုတိယနေရာတွင် ရှိနေကြောင်း On Device Research ၏စစ်တမ်းတွင် တရားဝင်ဖော်ပြလာသည်။ ရန်ကုန်မြို့ရှိ မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲသူ အများစုမှ ကုန်ကျစားရိတ်သက်သာပြီး ထိရောက်မှုရှိခြင်းကြောင့် Viber Application ကိုသုံးစွဲမှုများပြား ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့အပြင် မိုဘိုင်းဖုန်းတွင် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှု ပြုလုပ်ထားရုံနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်နိုင်သည့် အချက်ကလည်း Viber Application ကို သုံးစွဲသူများပြားစေသည့် အချက်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တွင်း မိုဘိုင်းဖုန်းဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူများက ဆိုကြသည်။ “Viber ရှိလို့ ပြည်ပကမိသားစုနဲ့ အလွယ်တကူ ဆက်သွယ်လို့ရတယ်။ သုံးရတာအဆင်ပြေတယ်။ ဒီပေါ်ကနေမှ အချင်းချင်းစာတို ပေးပို့တာတွေလည်း လုပ်လို့ရတဲ့အတွက် နေ့စဉ်သုံးဖြစ်တဲ့ အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုပါ" ဟု Viber Application ကိုသုံးစွဲနေသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောသည်။ Viber နှင့် Facebook Mess-enger App များကို အသုံးပြုသူအရေအတွက် ပိုမိုမြင့်တက်လာသော်လည်း ယခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နှေးကွေးသည့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများကြောင့် အသုံးဝင်သော အဆိုပါ Application ပိုမိုထိရောက်စွာ ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်ရန် လိုနေသေးကြောင်း မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲသူအချို့ ကပြောသည်။ “နိုင်ငံခြားဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာတွေက အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု ကောင်းကောင်းတွေ ပေးလာမယ်ဆို နေ့စဉ်မရှိမဖြစ် အသုံးဝင်တဲ့ Viber လိုမက်ဆေ့ခ်ျ အက်ပလီကေးရှင်းတွေရဲ့သုံးစွဲမှုပိုမြင့်လာမှာပါ" ဟု Viber Application ကိုပုံမှန်သုံးစွဲသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကပြောသည်။ On Device Research သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူ အရေအတွက် ၅၇၇ ဦးကို စစ်တမ်းကောက်ယူ ထားခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါစစ်တမ်းတွင် Viber သုံးစွဲသူရာခိုင်နှုန်းမှာ ၇၉ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် Facebook Messenger ကိုအသုံးပြုသည့်ပမာဏမှာ ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းဟု ဖော်ပြထားသည်။ ယင်းကဲ့သို့ Viber နှင့် Facebook Messenger App များကိုအသုံးပြု ကြသူများတွင် Android OS ထုတ်ကုန်ဖြင့် အသုံးပြုမှုက အများဆုံးဖြစ်ပြီး iOS နည်းပညာ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ဖြင့် အသုံးပြုကြသူများက ဒုတိယနေရာတွင် ရပ်တည်နေကြောင်းသိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အင်တာနက်သုံးစွဲသူစုစုပေါင်း၏ ထက်ဝက်ခန့်သည် မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှ အများဆုံး အသုံးပြုကြခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းအချက်က Viber နှင့် Facebook Messenger ကဲ့သို့သော Application သုံးစွဲမှုကိုပိုမိုမြင့်တက် စေခြင်းဖြစ်ကြောင်း အထက်ပါ မိုဘိုင်းဖုန်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူများက ပြောသည်။ ယခုလက်ရှိ အချိန်တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ Viber Application ကိုတပြိုင်တည် သုံးစွဲသူတစ်သန်း ရှိလာပြီဖြစ်သည်။
keyboard ကိုprofessional ကျကျသင်​ကြား
Music Lesson များကိုလည်း၊onlineမှတဆင့်​
★စာအုပ်​​ဒေါင်းရန်​ DOWNLOAD လင့်​ခ်​★
အသုံးဝင် iPhone Tricks ဆယ်ခု
အမျိုးအစား: iphone Trick
★★ Fifa World Cup 2014 Nigeria Vs Argentina ★★
Nigeria Vs Argentina ပွဲစဉ်ကိုမကြည့်လိုက်ရတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အမျိုးအစား: 1 FIFA WORLD CUP
✏ရာစုသစ်အခြေခံ အီလက်ထရွန်းနစ် မြန်မာလို စာအုပ်✏
-ရာစုသစ် အခြေခံ အီလက်ထရွန်းနစ် မြန်မာလိုစာအုပ်ကို ဝင်းထက်ဝင်းရေးသားထားတာပါ... Electronic အကြောင်းအခြခံကျကျ ရေးသားထားပြီးအဆင့်မြင့်လေ့လာလိုလိုသူများအတွက်လည်းအထောက်အကူပြုပါတယ်... ဒီခေတ်ကာလဟာ Electronic ကို လုံးဝပစ်ပယ်ထားလို့မရတဲ့အတွက် Electronic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကျောင်းသားတွေ၊ Service သမားတွေ လေ့လာဖို့ ကောင်းတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်-
♪ မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် အင်တာနက် အသုံးပြုသူ သုံးသန်းနီးပါးရှိ ♫
ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၏ ထုက်ပြန်ခဲ့သော ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မေ စာရင်းဇယားအရ မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုသူ အရေအတွက်သည် ၂၉၁၉၆၁၈ ဦးအထိ ရောက်ရှိလာခဲ့သည် ဟုသိရသည်။ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုသူ အရေအတွက်သည် ၆၆၄၅၀ ဦးသာရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်၌ မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် အင်တာနက် အသုံးပြုသူသည် သုံးသန်းနီးပါးသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ အလားတူ တယ်လီဖုန်း သိပ်သည်းဆသည်လည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်၌ ၁၅.၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ရောက်ရှိလာသည်ဟု သိရသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မေမှ ၂၀၁၄ ခုနှစ် မေအတွင်း သုံးနှစ်တာကာလ၌ အင်တာနက်စနစ် အသုံးပြုသူဦးရေသည် ၄၄ ဆနီးပါးမြင့်တက် လာခဲ့သော်လည်း အဆိုပါ ကာလများအတွင်း အင်တာနက် Bandwidth ချဲ့ထွင်မှုနှုန်းသည် ၃.၅ ဆ လောက်ချဲ့ထွင် နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် အသုံးပြုသူတိုးတက်မှုနှုန်းကို Bandwidth ချဲ့ထွင်သည့်နှုန်းက လိုက်၍ မမီနိုင်ဖြစ်နေသည်ဟု ဆက်သွယ်ရေး ကျောင်းအုပ်ကြီးက ၎င်း၏ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာ ၌ ဖော်ပြခဲ့သည်။ အင်တာနက် Bandwidth သည် ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ်အတွင်း 3.72 Gbps ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ် မေလ၌ Bandwidth ကို 27.36 Gbps အထိချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ခဲ့သည်ဟု မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းက ကြေညာသည်။ စုစုပေါင်းတယ်လီဖုန်းလိုင်း အသုံးပြုသူအရေအတွက်သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် မေလအထိ ၉၃၆၁၉၈၈ ရှိပြီး အဆိုပါအရေ အတွက်အနက် မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် အင်တာနက် အသုံးပြုသူအရေအတွက်သည် သုံးသန်းနီးပါးတည်ရှိ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တယ်လီးဖုန်း အသုံးပြုသူအရေအတွက်သည် ၃၅၉၈၁၁၃ ရှိပြီး သုံးနှစ်တာကာလအတွင်း ကိုးသန်းကျော်သို့ရောက် ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တယ်လီဖုန်းသိပ်သည်းဆကို ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ခုနှစ်အရောက်၌ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ရောက်ရှိလာမည်ဟု ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက် အလက် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနက ခန့်မှန်းထားပြီး တယ်လီဖုန်းလိုင်းများ တိုးချဲ့တပ်ဆင်နိုင် ရန် ပြည်ပမှအော်ပရေတာ နှစ်ခုကိုလည်း ပြည်တွင်း၌ ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ခန့်အပ်ထားသည် ဟုသိရ သည်။ သို့သော် လက်ရှိအချိန်၌ မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းများကို ကံစမ်းမဲစနစ်ဖြင့်သာ အရေအတွက်ကန့်သက် ၍ ရောင်းချနေဆဲဖြစ်သည်။
♪ ကြိုက်တဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစား ကြိုက်တဲ့ Firmware , HBoot , Recovery ကိုဒီမှာဒေါင်းမယ် ♫
ကြိုက်တဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစား ကြိုက်တဲ့ firmware ။ HBoot ။ recovery ကိုဒေါင်းနိုင်တဲ့ဆိုက်လေးပါ custom လား official အကုန်တင်ထားပေးထားတဲ့ဆိုက်လေးဖြစ်ပါတယ်
Recovery သီးသန့် - http://www.clockworkmod.com/
@ ဒါက Huawei official firmware များအစုံ သီးသန့်ရှိတဲ့ဆိုက်လေးပါ
http://mm-mpxteam.net/archiver/?fid-73.html ( မြန်မာဆိုက် )
@ ဒါက samsung official firmware များအစုံ သီးသန့်ရှိတဲ့ စမ်ဆောင်းမူရင်းဆိုက်လေးပါ
@ ဒါက Apple သမားတွေအတွက် official firmware များအစုံ သီးသန့်ဆိုက်လေးပါ
Download ဆွဲရာတွင် Full Speed နှင့် Resumeလင့်ရအောင်လုပ်နည်းလေးပါ
Credit to Djjoe Man (MMF)
အမျိုးအစား: android firmware , Android Firmware များစုစည်းမှု
★★Taskbar7v1.8 Apk (All Android)★★
မိမိရဲ့ဖုန်းမှာ Windows7ဒီဇိုင်း Taskbar လန်းလန်းလေးသုံးချင်သူတွေအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
It’s just same with Windows7Task Bar! (see the promotion video)
အမျိုးအစား: Android Application , Android Taskbar7Apk
Start menu for Android Version 1.4.3
Window XP,Window7တို့မှာပါတဲ့ Window အလံလေးနဲ့ Start Menu ကိုကွန်ပျူတာသုံးတဲ့သူတိုင်းသိကြမှာပါ။
အမျိုးအစား: Android Appliction
မြန်မာပြည်အတွင်း ပထမဦးဆုံး Mobile App ဖြင့် အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ၊ တိုက်ခန်း ရှာနိုင်ပြီ
ကမ္ဘာ့အိမ်ခြံ တိုက်ခန်းရှာ ရောင်း ၀ယ် လုပ်ငန်းဖြစ် သည့် HYPERLINK "http://www.lamudi.com/"LamudiHYPERLINK "http://www.lamudi.com/" မြန်မာ အတွင်း အခေါ် House မှ ဤအပတ်အတွင်း Android App ကို ရွှေမြန်မာပြည်သူများ အိမ်ခြံ တိုက်ခန်း ကွန်ဒို ရှာဖွေ မှု အဆင်ပြေရန် တီထွင်လိုက်ပါပြီ။
Disk Speedup v3.0.0.7465 Multilingual With Crack
ဒီကောင်းလေးကတော့ကျနော်ကိုယ်တိုင်းကြိုက်လိုတင်ပေးလိုက်တာပါ Disk ကိုတွေကို Speedup အ
ကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 (32-bit and 64-bit Editions) တွေကိုတော်တော်မြန်ဆန်တာကိုတွေရပါတယ်။ကြိုက်တယ်ဆိုရင်အောက်မှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။
♪ Online Account များကို ကာကွယ်ဖို့ နည်းငါးနည်း ♫
Internet မှာ အကောင့်တွေ Hack ခံရတဲ့သတင်းတွေ နေ့ တိုင်းကြားနေပါတယ်။ အဲဒီအတွက် သင့်ရဲ့Online Account တွေကို ကာကွယ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာသင့်အကောင့်တွေကို ကာကွယ်ဖို့နည်း (၅) နည်းကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Strong Passwords တွေကို အမြဲအသုံးပြုပါ။
Passwords တွေကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပေးခြင်းဟာ ဖောက်ထွင်းခံရဖို့ လွယ်ကူတဲ့အတွက် သင့် Passwords တွေကို Strong ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ မှတ်ရလည်းလွယ်တဲ့ ဖောက်ထွင်းရခက်တဲ့ Passwords တွေပေးရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကောင်းမွန်တဲ့ Passwords တွေပြုလုပ်ဖို့ အောက်ကအချက်တွေကိုလိုက်နာသင့်ပါတယ်။
• Dictionary ထဲမှာမပါတဲ့ စကားလုံးမျိုးကိုသုံးပါ။
• Special Characters, Numbers တွေကို အသုံးပြုပါ။
• Upper Case,Lower Case Letters တွေကိုရောနှောသုံးပါ။
• စကားလုံးအနည်းဆုံး (၁၀) လုံးပါဝင်သင့်ပါတယ်။
• Birthdate, Postal Code, Phone Number တို့ လို မှန်းဆရလွယ်တဲ့ Number တွေ၊စကားလုံးတွေကိုအသုံးမပြုသင့်ပါ။
• Letters တွေနေရာမှာ Numbers တွေ အစားထိုးသုံးပါ။ ဥပမာ ။ thuzar အစား thuz@1
• Sentence တစ်ခုကစကားလုံးတွေ ရဲ့ထိပ်ဆုံးစာလုံးတွေကိုအသုံးပြုပါ။ ဥပမာ ။ “Everything I Do I Do It For You” ဆိုတဲ့ စာကြောင်းကနေ EIDIDIFY ဆိုတဲ့ Password ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
• စကားလုံးတစ်ခု ကို Reverse လုပ်ပြီးသုံးပါ။ ဥပမာ ။ neighborhood ကနေ doohrobhgien ဆိုတဲ့ Password ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အပေါ်ကဥပမာ ပေးထားတဲ့ Passwords တွေကအရမ်းတော့ ကောင်းမွန်မှုမရှိပါဘူး။ Numbers , Letters, Special Characters တွေ ပါဝင်ပြီးရှည်လျားတဲ့ Passwords မျိုးပေးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါ။ ဥပမာ။ E1d_1D!4Y
Passwords ပေးဖို့ မစဉ်းစားတတ်ရင် Password Generator ၀က်ဆိုက်တွေကို Google ကနေ ရှာဖွေပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ၀က်ဆိုက်တစ်ခုကို အောက်က လင့် ကနေသွားရောက်နိုင်ပါတယ်။
အင်တာနက်အသုံးပြုသူတော်တော်များများက အကောင့် Password တွေကို မှတ်ရလွယ်အောင်တူညီတဲ့ Password တွေ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။သင့် Google Account ရဲ့Passwords ကိုပဲ Online Banking Account မှာသုံးမယ်ဆိုရင် Google Account ကို တစ်ခြားသူတစ်ယောက်က Hack သွားခဲ့ရင် သင့်ရဲ့ ငွေကြေးဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် မတူညီတဲ့ Passwords တွေကို အသုံးပြုဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Password Manager တွေသုံးပါ။
အင်တာနက်စွဲလမ်းသူတွေ အတွက်တော့ Online Account တွေ ရာဂဏန်းလောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲလောက်များတဲ့အကောင့်တွေမှာ မတူညီတဲ့၊ မှန်းဆရခက်တဲ့ Passwords တွေကို သင်ဘယ်လို Manage လုပ်မလဲ? LastPass လို Password Manager ကိုသုံးရင် Master Password တစ်ခုသာမှတ်ထားရမှာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ Passwords အားလုံးကိုမေ့ထားနိုင်ပါပြီ။ LastPass က Features တွေ များစွာပါရှိပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ Features အနည်းငယ်ကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Password Generator ပါရှိပြီး ဖောက်ထွင်းရခက်တဲ့ Passwords တွေကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Passwords တွေကို ကဏ္ဍတွေခွဲပြီးမှတ်သားပေးနိုင်သလို Auto Login, Auto Fill လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Passwords သာမကဘဲ Secure Notes, Auto Fill Form တွေကိုပါမှတ်သားပေးနိုင်ပါတယ်။
LastPass က Online , Offline ရောသုံးနိုင်ပါတယ်။ Online မှာလည်းသင့်အကောင့်တွေကိုသိမ်းထားတဲ့အတွက် Device အားလုံးကနေ Sync လုပ်ပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်။ Online မှာသိမ်းထားလို့စိတ်ချရပါ့မလား? အဲဒီအတွက် LastPass က Security Features တွေများစွာပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ Google Authenticator ကိုသုံးပြီး 2-step verification ပြုလုပ်နိုင်သလို တစ်ခြား Multi Factor Authentication လုပ်နိုင်တဲ့ Features တွေ လည်းရှိပါတယ်။
LastPass က Free/Premium နှစ်မျိုးရှိပြီး Windows,Mac,Linux တို့ မှာ Free သုံးနိုင်ပါတယ်။ Premium ၀ယ်သုံးရင်တော့ Mobile ,Tablet တွေမှာပါသုံးနိုင်တယ်လို့ အကြမ်းဖျင်းပြောနိုင်ပါတယ်။ Password တွေကို Online မှာမသိမ်းချင်ရင် KeePass လို Open Source Freeware ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ KeePass က LastPass လောက် Features တွေ မစုံသလို အသုံးပြုရတာသိပ်ပြီးအဆင်မပြေလှပါဘူး။
Google, Facebook, Microsoft စတဲ့ Service တွေက Two-Factor Authentication ကို Support ပေးပါတယ်။ အဲလို မျိုး Service တွေမှာ Two-Factor Authentication ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင့်အကောင့်တွေကို Passwords နှစ်ထပ်ခတ်ပြီးလုံခြုံမှုရှိစေပါတယ်။ Two-Factor Authentication က သင့်အကောင့်နဲ့ သင့်ဖုန်းကို ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Feature ကိုသုံးခြင်းဖြင့် သင့်အကောင့် Password တွေကို တစ်ခြားသူကသိသည့်တိုင်အောင် သင့်ဖုန်းသူ့ မှာမရှိတဲ့အတွက် သင့်အကောင့်ကို သူဝင်လို့ မရတော့ပါဘူး။ Two-Factor Authentication က သင့်အကောင့်ကို သင့် Mobile Phone နဲ့ ပူးချည်ထားသလို ဖြစ်ပါတယ်။
Password Recovery ပြုလုပ်ဖို့မတူညီတဲ့ အီးမေးသုံးပါ။
Websites တော်တော်များများမှာ Password မေ့သွားရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဖောက်ထွင်းခံရရင်ဖြစ်ဖြစ် Recover လုပ်နိုင်ဖို့တစ်ခြားအီးမေးတစ်ခုကို အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ Passwords မမေ့ခင်ကတည်းက Account Setting ထဲမှာ Setup လုပ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီ Feature ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင့်အကောင့် Hack ခံရရင် ပြန်ပြီး Recover လုပ်နိုင်မှာပါ။
အချုပ်အားဖြင့်ပြောရရင် အင်တာနက်အသုံးပြုနေရင်တော့ ဘယ်အရာမှစိတ်မချရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အပေါ်ကနည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီး သင့်အကောင့်တွေကို အကောင်းဆုံးကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
အမျိုးအစား: Internet Security , Internet ဗဟုသုတ , IT ဗဟုသုတ , Security
Wondershare PDF Editor & OCR Plugin 3.9.0.9 Editor Creador archivos PDF
သူငယ်ချင်းတို့အတွက် PC မှာ မရှိ မဖြစ် လိုအပ်တဲ့ Software လေး တစ်ခု တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. Wondershare PDF Editor နောက်ဆုံး Version လေးဖြစ်ပါတယ်..ဒီsoftware အကြောင်းကို တော်တော်သူငယ်ချင်းတွေတော်တော်နားလည်းနိုင်ပြီးသားလိုကျနော်တင်ပေးလိုက်ပတယ်။န နားမလည်းသူငယ်ချင်းတွေအတွက်ကျနော် နည်းနည်းပြောလိုက်နော် ငိငိ.. တိန်... ကိုဝင်းလှိုင်ရယ်
အမျိုးအစား: PDF Editor
WinRAR 5.00 32-64bits Full Version
Window XP/Vista/7/8 အတွက် WinRAR 5.00 လေးကိုတင်းပေးလိုက်ပါတယ် ဒီကောင်းလေးတော့
အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဟောင်းသုံးသူတွေ Update လုပ်လိုက်ပါအုန်း။ဒါမှဖိုင်တွေဖွင့်ရင်
မြန်ဆန်ပြီးသွတ်သွတ်လက်လက်အလုပ်လုပ်မှာပါ။unpack လုပ်ပေးနိုင်တာတွေကတော့ RAR, ZIP,CAB,
အမျိုးအစား: WinRar Full Version
★★ The Walking Dead: Season Two New update version 1.0.7 Mod APK Full Unlocked ★★
ဂိမ်းဝါသနာရှင်များအတွက် The Walking Dead ရဲ့ Season Two ဖြစ်တဲ့ Full Unlocked လေးကိုတင်
ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒေါင်းလော့စ်ဆွဲလို့ရတဲ့ဖိုင်တွေကိုဖြည်ပြီး SDCARD/Android/Obb/ ထဲထည့်ပြီး Apk
ကိုအင်စတောလုပ်ပြီးကစားနိုင်ပါပြီ။Android : 3.1 နှင့်အထက်ကစပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
✏USB Debugging on ထားစရာမလိုဘဲ ဖုန်းမှ Pattern Lock များကိုဖြုတ်နိုင်သော Tool✏
-USB Debugging on ထားစရာမလိုဘဲ ဖုန်းမှ Pattern Lock များကိုဖြုတ်နိုင်သော Tool ထွက်ရှိလာခဲ့ပြီသည်။ ယင်း Tool လေးကိုရေးသားထားသူကတော့ ကို Psychist Naing Lynn ဖြစ်ပါတယ်။ Samsung Ace,Huawei y511, g520 g525 auxv920 နဲ့ huawei တော်တော်များများမှာစမ်းသပ်အောင်မြင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကျန်တဲ့ဖုန်းတော်တ်ာများများမှာလည်းအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ USB Debugging on ထားစရာမလိုဘဲ ဖုန်းမှ Pattern Lock များကိုဖြုတ်နိုင်သော Tool ကိုအောက်က link မှာရယူပါ။
လုပ်နည်းကတော့ ဖုန်းကို Recoveryဝင်ပါ ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ပါ ပြီးရင် ဇစ်ဖိုင်ထဲက .bat ကို run ပါ။ reboot ကျပြီးပြန်တက်လာရင် လော့ပျက် ဒီဘက် အွန်ပြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဇစ်ဖိုင်ထဲမှာထည့်ပေးထားတဲ့ introduction.text ကိုဖတ်ပါ။ ကွန်ပျူတာချင်း ဖုန်းအခြေအနေချင်းမတူတဲ့အတွက် အချို့ဖုန်းတွေမှာတော့
★★ Fifa World Cup 2014 Belgium Vs South Korea ★★
Belgium Vs South Korea ပွဲစဉ်ကိုမကြည့်လိုက်ရတဲ့သူတွေအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။တိုက်ရိုက်
★★Advanced System Protector 2.1.1000.13627 DC 26.06.2014 + serial ★★
ဒီကောင်လေးကတော့ Windows System တွေအားလုံးရဲ့ latest security tool လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Spyware, Adware, Key Loggers, Browser Hijackers, Malware နှင့်အခြားသော malicious programs တွေအားလုံးအတွက် spying လုပ်ပေးမယ့် Tool လေးပါပဲ။မိမိကွန်ပြူ တာ cause နှင့် harm
ခြင်းမှလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။မလိုအပ်ပဲဝင်လာတဲ့ plug-in တွေ DLL files ,Shell Registry စသည်
တို့ကိုလည်းဖယ်ရှားပေးပါတယ်။Full ဖြစ်စေဖို့အတွက် Serial ကီးလေးကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
အမျိုးအစား: Security Software , Software
♪ မှောင်ခိုဇတ်လမ်းဆန်ဆန် Action Game - Underworld Empire v0.1.0 APK ♫
အပစ်အခက်ဝါသနာပါသူများအတွက် Action Game ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ တင်ထားတဲ့ Screen Shot တွေကိုကြည့်ရုံနဲ့တင် ကစားလို့ကောင်းတဲ့ Game လေးဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိကြမယ် လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ။ Game အတွက် Apk တစ်ခုထဲနဲ့လုံလောက်ပါတယ်။ Obb Data ထည့်စရာမလိုဘူး ဆိုတော့ ပိုပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့နော်။ ရုပ်ထွက်ရော အသံပိုင်းပါအထူးကောင်းမွန်တဲ့ Game တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အတွက် အရသာရှိရှိ ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Android OS 2.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါ တယ်ဗျာ။
♪ GE က စမတ်ဖုန်း App မှ ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် LED မီးလုံးများကို ကြေညာ ♫
ကုမ္ပဏီများက စမတ်ဖုန်းမှ ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် လူ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို အပြိုင်အဆိုင် ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေပါသည်။ ယခုအခါ GE က စမတ်ဖုန်းမှ ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် မီးလုံးများကို ဈေးနှုန်း သက်သာစွာဖြင့် ရောင်းချပေးမည်ဟု ကြေညာပါသည်။ စမတ်မီးသီးများသည် အင်တာနက် ချိတ်ဆက်နိုင် သည့်အတွက် မည်သည့်နေရာမှမဆို စမတ်ဖုန်းမှ ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါမီးသီးများကို Link ဟု အမည်ပေးထားပြီး (၁၅) ဒေါ်လာအောက်ဖြင့် ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ မီးသီးများကို Quirky မှ iOS နှင့် Android တို့အတွက် တီထွင်ထားသည့် Wink App မှ ထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မီးလုံး အဖွင့်၊ အပိတ်နှင့် အလင်းရောင်ကို App မှ Schedule ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီများက စမတ်မီးသီးများကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချလျက်ရှိသော်လည်း Link သည် အလွန်ဈေး သက်သာသည်ဟု သိရပါသည်။ Wink App မှ Aros စမတ် လေအေးပေးစက်အပါအ၀င် အခြား Device များစွာကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။
Link ကိုစားပွဲခုံများတွင်မီးအိမ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်၊ ထမင်းစားခန်း၊ ဧည့်ခန်းများတွင် အသုံးပြုရန် ၊ နေအိမ်ပြင်ပ တွင် အသုံးပြုရန် သုံးမျိုးထုတ်လုပ်ပေးထားပါသည်။ ၁၅ ဒေါ်လာတန် မီးသီးသည် မီးအိမ်အတွက် အသုံးပြု ရန်ဖြစ်ပြီး အခြား မီးသီးနှစ်မျိုး၏ ဈေးနှုန်းကို ကြေညာခြင်းမရှိသေးဟု သိရပါသည်။
မီးသီးများကို ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ကြိုတင်မှာယူနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ဒါကတော့ အဘိဓါန်လေးပါ ဘာလဲဆိုတော့
လေးတွေကို နားလည်အောင် ကိုယ်သိချင်တဲ့
ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စကားလုံးတွေကို မေးလို့
လေးပါ ကွန်ပျူတာအဘိဓါန်လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်
Download : (380)KB
Pangu 1.1 (windows) Eng Version Download
အမျိုးအစား: jailbreak tools
ဒါကတော့ Youtube တော့ မဟုတ်ဘူး Sexy Tube လေးပါ
နမည်ကို ကြည့်တာနဲ့ ဘာလဲဆိုတာ ပြောပြစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်
Download : (462)KB
★★ GreenCloud Printer Pro 7.7.2 DC 26.06.2014 + serial ★★
ဒီကောင်လေးကတော့Website နှင့်အခြားသော Page တွေကနေစာမျက်နှာတွေကို Pdf files အဖြစ်ထုတ်
ယူနိုင်သည့်အပြင် Pdf files မှမိမိလိုအပ်သောစာမျက်နှာကိုထုတ်ယူနိုင်သည့်အပြင် save လုပ်နိုင်ပါတယ်
ထို့အပြင်မိမိအလိုမရှိတဲ့ Page တွေကိုလည်း Remove လုပ်နိုင်ပါတယ်။Dropbox, Google Docs, Minus.com စသည်တို့မှလည်းတိုက်ရိုက် Print ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအများကြီး
ပါ။Full ဖြစ်စေဖို့အတွက် Serial ကီးကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
အမျိုးအစား: Printer နှင့်ပတ်သက်သမျှ , Software
★★Crystal Battery Version : 1.2 Apk (All Android)★★
အမျိုးအစား: Android Battery Apk , Android Application
★★ Fifa World Cup 2014 Algeria Vs Russia ★★
Algeria Vs Russia ပွဲစဉ်ကိုမကြည့်လိုက်ရတဲ့သူတွေအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ရုပ်သံကြည်လင်စွာ
မင်္ဂလာပါ။ကိုယ့်PCရဲ့Driverဘယ်လေးနေရင် မြင့်တင် ပေးမယ့်Booster Softwareလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။t
Posted by mmitdeveloper
အမျိုးအစား: Computer Software , System Tool
Win To USB Beta
မင်္ဂလာပါ။Windowတင်တဲ့အခါUSBနဲ့တင် လေ့ရှိတဲ့သူငယ်ချင်းများနဲ့Serviceသမားများတွက်Win To USB Tweaking Toolလေးကိုတင် ပေးလိုက်ပါတယ်။Beta Versionလေးပါ။
အမျိုးအစား: Computer Software , Tweaking Tool
မင်္ဂလာပါ။Virusသတ်ရာမှာအစွမ်းထက်တဲ့Rouge Killer Antivirus Softwareလေးတင် ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
အမျိုးအစား: Computer Software , Security
မင်္ဂလာပါ။နက်ဝက်သမားများနဲ့Wifi Userတွေတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့Wifi NetworkကိုDetailပြ ပေးမယ့်Monitoring Softwareလေးပါ။SSID,ChannelစတာတွေကိုDetailပြ ပေးပါတယ်။
အမျိုးအစား: Computer Software , Networking Tool
✏Digital Music Mentor(for pc)✏
ဂစ်တာသမားများအတွက် သီချင်းဖွင့်လျှင် သီချင်းထဲမှာပါတဲ့ Key, Cords, လက်ကွက်တွေကို အလိုလျှေက်ပြပေးမယ့်
-setup ဖိုင်ကိုသွင်းပြီးလျှင် program ကို မဖွင့်ပဲ ပိတ်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးလျှင်Crack ဖိုင်ကို ဖွင့်ပြီး C:\_Program Files\_Sienzo\_DMM လမ်းကြောင်းကိုရွေးပြီး ဖြေ/သွင်းပေးလိုက်ပါ-
-သုံးနည်းကတော့ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း (၁) Load ကိုနှိပ်ပြီး သီချင်းရွေး (၂) Analyze နှိပ်ပြီး (၃) Play ကိုနှိပ်ပါ-
Windows 8 နဲ့ 8.1 မှာ Windows Store ဝင်မရတဲ့ပြဿနာ
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်ကနေ Widnows 8 နဲ့ Windows 8.1 ကိုသုံးတဲ့သူတွေ အများစု ဒုက္ခအရောက်ဆုံး ကိစ္စကတော့ Windows Store ကို တရားဝင်သုံးလို့ရတဲ့ List ထဲမှာပါရဲ့သားနဲ့ ဝင်မရတဲ့ ပြဿနာပါ။ Store ဝင်မရတဲ့အတွက် Windows 8 နဲ့ 8.1 user တွေ တော်တော်လေး ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။ Windows 8 မှာဆိုရင် 8.1 update free ပေးတာတောင် Store ဝင်မရတာနဲ့ update ကိုလက်လွတ်ရမလိုပါပဲ။ Windows Surface တွေတော့ တချိ့ဝင်လို့ရတယ်လို့ အွန်လိုင်းမှာတွေ့တယ်။ ကိုယ်တိုင်တော့ မသုံးကြည့်ဘူးဖူး။ ကဲ လိုမယ့် ဆော့ဝဲလေးကတော့ များများစားစားမရှိပါဘူး။ ဒီလင့်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ။ ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ အချုပ်အရင် ပြောမယ်နော်.. ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲ၊ မြန်မာပြည်က ဝင်မရလို့ တခြားနိုင်ငံကနေ ဝင်သလိုမျိုးလုပ်မှာပါ။ vpn ပေါ့ သုံးတဲ့ app ပေါ်မူတည်ပြီး နိုင်ငံရွေးချယ်မှုကွဲပါမယ်။ ဒီအောက်က လင့်ကတော့ အဆင်ပြေမှာပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်း လက်ရှိသုံးနေတာဆိုတော့။
ပုံထဲကအတိုင်း Windows ဖြစ်တဲ့အတွက် အပေါ်ဆုံးကဟာကို ဒေါင်းလိုက်ပါ။ တခြား vpn တွေလည်းရှိပါသေးတယ်.. ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတာ သုံးကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဒါလေးကတော့ အလကားရတဲ့ ဟာလေးပါ။ အင်စတောလုပ်ပြီးရင် နောက်တစ်ခု ဒေါင်းရပါအုံးမယ်.. http://www.vpnbook.com/ ဒီဆိုက်ဒ်ထဲမှာ
ပုံထဲကအတိုင်း ၄ ခု ဒေါင်းလို့ရပါတယ်။ Recommend ပေးချင်တာက အောက်ဆုံးက US Server လေးပါ။ အပေါ်လေးမှာပဲ Username နဲ့ Password ကိုပေးထားပါတယ်။ Username ကတော့ အမြဲတန်း vpnbook ပဲ။ Password ကတော့ ၁၅ ရက်တစ်ခါလောက်ပြောင်းတယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့ ပြောင်းသွားရင်လည်း ဒီဆိုက်ဒ်ထဲ ဝင်ပြီးပြန်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ဒါဆို tools စုံသွားပါပြီ။ Openvpn Client ကိုပုံထဲကအတိုင်း ဖွင့်လိုက်ပါခင်ဗျား။
စစချင်းဖွင့်ရင် Connection Profiles မှာ ဘာမှမရှိတဲ့အတွက် ဘေးက + လက္ခနာလေးကို နှိပ်လိုက်ပြီး Add ရမှာပါ။ ပြီးရင် Import Profile ဆိုတဲ့ box ကျလာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ထဲက Local file ကိုရွေးပေးရမှာပါ။ Import ကိုနှိပ်ရင် ဖိုင်လမ်းကြောင်း တောင်းပါလိမ့်မယ်.. ပြီးရင် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားတဲ့ ( USA Server) compressed ဖိုင်ကို ဖြည်ချထားတဲ့အထဲ သွားလိုက်ပါ။ ၄ ခုရှိပါတယ်. အောက်ဆုံးက udp25000 ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Local file ဝင်သွားပါပြီ။ အဲဒိအပေါ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒီအောက်ကပုံလေး တက်လာပါလိမ့်မယ်။
ပုံထဲကအတိုင်း ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Login ပေါ့။ သေချာချင်လို့ရှင်ရင် Browser ကိုသွား http://www.ip-1.com/ ဒီလင့်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ip information ရလိမ့်မယ်။ Login မလုပ်ခင် ဒီလိုပြလိမ့်မယ်။ ( Myanmar )
ပြီးရင် Login လုပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ဒီလိုမျိုးတဆင့်ချင်း ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံး ဒီလိုပေါ်လာရင်ရပါပြီ။ ခုနက ip information လင့်မှာ Refresh လုပ်လိုက်ပါ။ အောက်ကပုံလို ပေါ်ပြီဆိုရင်တော့ ရသွားပါပြီ။
ခင်ဗျားအခု အမေရိကန်ကသုံးနေတဲ့လူ ဖြစ်သွားပြီ။ ဒါဆို Store ကိုချိတ်ကြည့်မယ်။ အောက်ကပုံထဲကလို မြင်သေးရင်တော့
အဲဒါ Connection မကောင်းလို့ပါ။ Retry ပြန်လုပ်ပေးပါ။ ဒီလိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
အဲဒါ Store က အရင် Myanmar ip နဲ့ပဲဖြစ်နေလို့။ Run Box ကနေပြီး WSReset.exe ကိုရိုက်လိုက်ရင်တော့ Store ထဲ Reset လုပ်ပြီးဝင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဝင်သေးရင်တော့ Control Panel ထဲက Region မှာ Myanmar ဖြစ်နေရင် United State ပြောင်းပေးရမှာပါ။ ( အရှေ့မှာ Server down တုန်းက တခြားနိုင်ငံဆိုရင် အဲဒိနိုင်ငံအမည်ကို ရွေးပေးပါ။ တူမှရမှာမိုလို့ပါ။) ပြီးရင် Restart ချပြီးမှ ပြန်ချိတ်လိုက်ပါ။ မချရင် တခါတလေ ချိတ်မရတာ ဖြစ်တတ်လို့ပါ။ Step တွေအကုန်လုံးမှန်ခဲ့ရင်တော့ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ထိုင်စောင့်နေ လိုက်ပါ။ မြန်မာပြည်ကော်နက်ရှင်နဲ့ ဆိုတော့ ကော်ဖီသွားဖျော်လို့ မှီပါသေးတယ်.. ပျော်ရွင်ကြပါစေ။ ရသွားရင်တော့ ဒီလိုမြင်ကြရမှာပါ။
အမျိုးအစား: win 8.1 ဆိုင်ရာ , Window 8 , နည်းပညာ
▼ June ( 662 )
♪ ပြည်တွင်း၌ လူသုံးအများဆုံး Messaging App အဖြစ် V...
♪ မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် အင်တာနက် အသုံးပြုသူ သုံးသန်း...
♪ ကြိုက်တဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစား ကြိုက်တဲ့ Firmware , H...
Wondershare PDF Editor & OCR Plugin 3.9.0.9 Editor...
★★ The Walking Dead: Season Two New update version...
✏USB Debugging on ထားစရာမလိုဘဲ ဖုန်းမှ Pattern Loc...
★★Advanced System Protector 2.1.1000.13627 DC 26.0...
♪ မှောင်ခိုဇတ်လမ်းဆန်ဆန် Action Game - Underworld ...
♪ GE က စမတ်ဖုန်း App မှ ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် LED မီ...
★★ GreenCloud Printer Pro 7.7.2 DC 26.06.2014 + se...
★★Crystal Battery Version : 1.2 Apk (All Android)★...
✏Bookmark SB Pro v2.39✏
♪ မိမိဖုန်းမှာ virus ရှိမရှိ သိရှိ နိုင် မည့် နည်း...
✏MX Player Pro v1.7.28✏
★★ IObit SmartDefrag 3.2.0.332 Portable ★★
Nero Burning Rom 2014 v.15.0.07700 Portable
✏Windows 8 အတွက် Zawgyi-One Font ၊ Zawgyi keyboard...
✏Facebook Birthday Reminder v3.7✏
♪ Any Video Converter Professional 5.6.3 + Crack ♫...
★★ Dream Aquarium Screensaver 1.29 Final + Crack ★...
★★ JRiver Media Center 19.0.145 + Crack ★★
Computer Viber မှာမြန်မာစာ မပေါ်သူများအတွက်
★★ Static Backup 8 v1.256 + Reg ★★
Hot Guy Livewallpaper
Negative Photo Effect Apk
Kidney Hospital Apk
♪ ဖိုင်တင်ချချင်သူများအတွက် - THE RHYTHM OF FIGHTE...
♪♪ ကျပ်ငွေ သိန်းတစ်ရာတန် GPS နာရီ ♫♫
✏Total SmS Control v2.1.5 for Android Apk နှင့်အသံ...
✏IM+Pro v6.6.2 Apk(for android)✏
✏Advanced Download Manager Pro v3.5.7✏
♪ iPhone official unlock လုပ်ပေးခြင်း ၀န်ဆောင်မှု ♫...
♪ ခပ်ကြမ်းကြမ်းစစ်ဆင်ရေးဆင်နွဲချင်သူများအတွက် - De...
♪ အမေရိကန်-ဘယ်လ်ဂျီယံပွဲ ဘီယာကြေးလောင်းရန် ဘယ်လ်ဂျ...
♪ Android ကို ပိုမိုလုံခြုံအောင် ပြုလုပ်ထားနိုင်မည...
♪ Notification တွေကိုရောင်စုံသတ်မှတ်ပေးနိုင်တဲ့ - ...
♪ အမျိုးအစားတူ ဆင်းမ်ကတ်အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုက...
Windows 8 Manager versiones v.2.0.7 2014 Portable ...
Galaxy Star Duos GT-S5282 Firmware Download
♪ အကြမ်းခံဖုန်း တပ်ပလပ် Panasonic ToughPad ♫
♪ ကာလာစုံ၊ ဈေးချိုလာတဲ့ iPod Touch ♫
♪ Android Wear မောင်းနှင်သည့် Samsung Gear Live နှ...
Photo Collage Max 2.3.0.2 With Key Full Version
♪ Samsung စမတ်ဖုန်းများ၏ ဝယ်လိုလား တဖြည်းဖြည်းမြင်...
♪ မြန်မာနိုင်ငံမှ GSM နှင့် WCDMA ဖုန်းများအား နို...
♪ ဂျပန်ဆာမူရိုင်းဖိုက်တင်ဂိမ်း - Samurai II: Venge...
♪ Hisense က Mira6Windows Phone ကို ထုတ်လုပ် ♫
✏Facebook Unoffical v13.0.0.0.7✏
♪ ဖုန်းပေါ်မှာရောင်စုံငါးလေးတွေနဲ့ Live Wallpaper -...
CCleaner Professional / Business 4.15.4725 Crack ,...
WindowsToUSB Lite v1.3.2 Full Version
Hidden Files တွေကိုဖော်ပေးမယ့် Fix Attrib Tool လေး...
♪ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ LG စမတ် န...
♪ Phone Network တွေအကြောင်းသိကောင်းစရာ ♫
✏Root Apk ၁၁မျိုးစုစည်းမှု✏
♪ Netguide Journal Vol (3), Issue (40) (26.6.14) ♫...
★★ IObit Malware Fighter Pro 2.4.1.16 Multilingual...
✏Blogaway Apk v5.9(android)✏
AntiVirus PRO Mobile Security Version 4.1 For Andr...
Facebook v13.0.0.0.6 For Android
★★ Root Explorer v3.1.8- Android Apk ★★
♪ TuneUp Utilities 2014 v14.0.1000.324 + Keygen ♫
AVG Anti-Virus Pro 2014 v14.0 Build 4714 Final Mul...
IObit Malware Fighter Pro 2.4.1.16 with Keygen and...
♪ Google က မော်တော်ကားများအတွက် Android Auto ကိုြ...